Danalock V3, rino smart kiyi inoenderana neKeKKit ikozvino inogona kutengwa kuSpain | Ndinobva mac
Danalock V3, rino smart kiyi inoenderana neKeKKit ikozvino inogona kutengwa kuSpain
Ruben gallardo | | Accessories
Kugona kukanganwa nezve kiyi yekumba nekuti isu tinokwanisa kuvhura musuwo nenjere michina kwave kugona kwenguva yakati. Nekudaro, isu tinofanirwa kuwedzera imwe yemaprotocol akakosha emakore apfuura: HomeKit, chiyero icho Apple inoda kuti imba yako ive nenjere. Uye kuti uite izvi, yawedzera chinhu chitsva muApple Chitoro pamhepo: Danalock V3, smart kiyi iwe yaunogona kudzora kuburikidza neApple makomputa, pamwe nekushandisa Siri.
Lock iri Danalock V3 inogona kutowanikwa muEurope munyika dzakasiyana, pakati payo iri Spain. Kubva ikozvino zvichienda mberi, uye kana iwe ukaiisa mumba mako, yeuka kuti iwe unogona kuvhura nekuvhara musuwo mukuru wemba yako zvese kubva ku "Kumba" kunyorera uye uchishandisa wega mubatsiri Siri.
"Kumba" kuuya macOS inotevera Gunyana apo macOS Mojave yakagadzirira. Zvichakadaro, HomeKit inoenderana nezvimwe zvese zvishandiso zveiyo nguva. Danalock V3 smart kiyi iyo iwe yaunogona kuwana muApple Chitoro pamhepo pamutengo we 249,95 euros uye kuti yave kuwanikwa izvozvi zvekutumira kwako.
Kune rimwe divi, pamusoro pekukwanisa kuvhura nekuvhara imba yedu zvisina waya uye zvakachengeteka zvakakwana, isu tinokwanisa zvakare kupa mukana kune dzakasiyana nhengo dzemhuri yedu -Kunogara kubva kuApp app - kana kupa mukana kune vakasiyana vanhu kwechinguva. Kunyangwe mune yekupedzisira kesi ini handinyatso kuziva kana taigona kuzvivimba pachedu.
Saizvozvowo, Danalock V3 haina kufanana nekuve nefoni kana tekinoroji timu, asi ndoda Chero ani ane akajairwa makiyi anozokwanisa kuenderera kushandisa kiyi sepakutanga. Kunyangwe isu tichikusiya uine gwaro rekuisa Nemhando dzakasiyana, Apple yatonyevera kuti pasuru yekutengesa iyo inogoverwa muSpain haina chekuita nemodeli iyo inotarisana nenyika dzeScandinavia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Danalock V3, rino smart kiyi inoenderana neKeKKit ikozvino inogona kutengwa kuSpain
Mumwe wevanonyanya kukosha mainjiniya eWaymo, anoenda kuApple
Aya ndiwo maitiro atichafambira neinternet muwatchOS 5